रोग लुकाइयो, पीडा लुकेन |
रोग लुकाइयो, पीडा लुकेन
प्रकाशित मिति :2016-01-24 14:06:01
जाजरकोट जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्याबाट धेरै महिला पीडित छन् । तर, धेरैले लुकाउने यो रोगको उपचार गर्न अहिलेसम्म सञ्चालन गरिएका सरकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् ।
जाजरकोट । भुर गाविस– ८ नुवागाउँकी हिउँसरा पुन ७० वर्ष पुगिन् । एक छोरा, १५ नातिनातिनाकी अभिभावक पुनले उमेर छउन्जेल लाजले लुकाएको पीडाले अहिले दुःख दियो । यसै कारण उनको जीवनका पछिल्ला दिन कष्टकर भइरहेका छन् ।
पाठेघर खसेका कारण अहिले उनलाई हिँडडुल गर्न गाह्रो भइरहेको छ । यो समस्या कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नेसम्म उनलाई सम्झना छैन । तर, थाहा पाएदेखि उनले आफ्नो समस्या लुकाइन् । पाठेघर सडेर गनाउने भइसकेपछि समस्या लुकेन । परिवारका सदस्यलाई उनले आफ्नो समस्या बताउँदा ढिला भइसकेको थियो । ‘पहिले लाज लागेर कसैलाई भनिनँ, अहिले दुखेर हैरान हुन्छ,’ उपचारका लागि भुर स्वास्थ्यचौकी पुगेकी हिउँसराले आँसु चुहाउँदै भनिन्, ‘यहाँ उपचार हँुदैन भन्छन् । यो उमेरमा म कहाँ जाऊँ ।’
समस्या पुरानो, आर्थिक अवस्था कमजोर तथा स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार नहुने भएपछि हिउँसरा र उनको परिवार अहिले चिन्तामा छ । उमेर छँदै लुकाएको पीडा बल्झन थालेपछि बल्ल उनले उपचारको व्यवस्था गर्न भनेको छोरा कर्णबहादुर पुनले बताए । पुन भन्छन्, ‘बुबा ८० वर्ष पुग्नुभो । आँखा देख्नुहुन्न, कान सुन्नुहुन्न । आमाले पहिले भन्नुभएन, अन्तिम चरणमा पुगेको बेला मात्रै भन्नुभयो । हामीले सक्ने ठाउँमा उपचार हुँदैन, अन्यत्र लगेर उपचार गर्ने औकात छैन ।’
ढिमे– २ दम्दालाकी लालक्वारा चन्द १२ वर्षदेखि पाठेघर खसेर थलिएकी छिन् । आर्थिक अभावका कारण परिवारले उनको उपचार गर्न सकेको छैन । ४५ वर्षीया चन्दको पाठेघर बाहिर झरेर घाउ भएको छ । चौरजहारी अस्पताल रुकुममा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई समस्या भएको छ । सुरुमा लाजले रोग लुकाउँदा अहिले जीवनमरणको सवाल बनेको लालक्वारा बताउँछिन् । झाप्राकी– २ की ३५ वर्षीया राधिका खत्री पनि पाठेघर खसेर थला परेकी छिन् । दुई छोरीकी आमा राधिका एक वर्षदेखि यो समस्याबाट पीडित छिन् । श्रीमान् मानबहादुर खत्री विदेश गएकाले उनको उपचार हुन सकेको छैन ।
हिउँसरा, लालक्वारा र राधिकाजस्तै जाजरकोटका दुर्गम गाउँका महिला पाठेघर खस्ने समस्याले पीडित छन् । महिला अधिकार मञ्च जाजरकोटले गरेको सर्वेक्षणअनुसार जिल्लाका ४७ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या छ । जिल्लाका आठ गाविसमा गरेको सर्वेक्षणले यो समस्या देखाएको हो । ती गाविसका सात सय ८० महिलाको अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मञ्चले जनाएको छ । त्यसमा पनि पहिलो र दोस्रो चरणमा सामान्य उपचार गर्नुपर्ने थोरै छन् । अधिकांशको तेस्रो चरण पुगेकाले अप्रेसन गरेर पाठेघर नै फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्लामा दक्ष जनशक्ति छैन । पीडितसँग पनि उपचार खर्च अभाव हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । बेलाबेलामा दुर्गममा गरिने स्वास्थ्य शिविरमा पाठेघर खसेका महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य भेटिए पनि जिल्लामा उपचार गर्ने व्यवस्था छैन । सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भनिए पनि जिल्लामा त्यो हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति र उचित पूर्वाधार व्यवस्थापनको अभावमा सम्भव नभएको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका डा. दीपक पुनले बताए । समस्या पत्ता लागे पनि उपचारको व्यवस्था नहुँदा सुझाव दिने गरेको डा. पुनको भनाइ छ । जिल्लामा १८ देखि ८० वर्ष उमेर समूहका महिलामा यो समस्या देखिएको छ । ३५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका बढी महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित छन् ।
सानैमा विवाह गर्ने, धेरै सन्तान जन्माउने, पोषणको अभाव र असुरक्षित गर्भपतन गराउनेजस्ता कारणले पाठेघर खस्ने समस्या बढेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । समस्या देखिनेबित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गरेमा जटिल नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । डा. ओम बिसी भन्छन्, ‘अहिले पनि महिलाले पाठेघर खसेको सजिलै भन्न आँट गर्दैनन् । समस्या लुकाएर बस्दा पछि जटिल हुन पुग्छ ।’
स्वास्थ्य संस्थामा महिला चिकित्सक नहुँदा पनि समस्या बढेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष तारा शाक्य बताउँछिन् । उपचार गर्ने महिला नै भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने र उपचारका लागि अस्पताल जाने महिलाको सङ्ख्या बढ्ने उनको बुझाइ छ ।
महिला अधिकार मञ्चका कार्यक्रम संयोजक निर्मला थापाका भनाइमा ‘कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने, शारीरिक रूपमा परिपक्व नभई असुरक्षित सुत्केरी हुने र सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणयुक्त खाना अभावले महिलाको पाठेघर खस्ने गरेको छ ।’ सुरक्षित सुत्केरी सुविधाको अभाव र चेतनाको कमीले यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
पाठेघर खसेका महिलाको उपचार र अप्रेसनको व्यवस्था जिल्लामा गर्न महिला अधिकारकर्मीले माग गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । जिल्लाको यो विकराल समस्या समाधानका लागि जिल्ला अस्पतालमा उपचारको समेत व्यवस्था छैन । महिला सञ्जालकी अध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘हामीले सरकारलाई मागपत्र पठाउनेदेखि नेतालाई पहल गर्न अनुरोध गरेका छौँ । अहिलेसम्म केही हुने छाँट छैन ।’
हालसम्म केड नेपालको आर्थिक तथा चौरजहारी अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा जाजरकोटका चार सयभन्दा बढी महिलाको अप्रेसन गरिएको छ । कार्यक्रमका रूपमा अप्रेसन गरिए पनि यसलाई महिलाको स्वास्थ्य उपचार सुविधासँग जोडेर नियमित बनाउनुपर्ने महिलाको माग छ । उपचारपछि ती महिलाले नयाँ जीवन पाएको बताउने गरेका छन् । ‘लामो समय पीडा सहेर बसेँ । अप्रेसनपछि नयाँ जीवनको सुरुवात भएको छ,’ खलङ्गा– ६ की सरस्वती कार्कीले खुसी हुँदै भनिन्, ‘अब मैले सबै पीडित महिलाले उपचार र अप्रेसनको सुबिधा पाउनुपर्छ ।’
जिल्लाका अति दुर्गम मजकोट, झाप्रा, डाडागाउँ, कार्कीगाउँ, भुर, सक्ला, रोकाय गाउँ, नायकवाडालगायतका गाविसमा पाठेघर खस्ने समस्या धेरै देखिएको छ । ती गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणले धेरैजसो महिला पाठेघर खसेर पीडित बनेका छन् । पहिलो चरणमा रहेकाले पीडा लुकाए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा पुगेका भने पीडा लुकाउन नसकी थलिएका छन् ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि जनचेतना वृद्धि, प्रजनन अधिकारको वकालत, सुरक्षित सुत्केरी सुविधा विस्तार र जिल्लामा उपचारको उचित व्यवस्थापनको वातावरण बनाउनुपर्ने डा. बिसीको सल्लाह छ । उनी भन्छन्, ‘रोकथामका लागि उपचार र समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन उपाय खोजिनुपर्छ ।’
(वीरबहादुर, जाजरकोटका पत्रकार हुन् ।)
प्रकाशित मिति २०७२ माघ १० गते अाईतवार